Shina Inona no dikan'ny hoe angovo manokana mpanamboatra sy mpamatsy | Chang Liang
Inona no atao hoe angovo manokana
Ny angovo dia manondro ireo loharano afaka manome angovo. Ny angovo eto matetika dia manondro angovo hafanana, angovo elektrika, angovo maivana, angovo mekanika, angovo simika sy ny sisa. Zavatra afaka manome kinetika, mekanika ary angovo ho an'ny olombelona
Ny loharanom-angovo dia azo zaraina ho sokajy telo lehibe:
(1) angovo avy amin'ny masoandro. Tafiditra ao anatin'izany ny angovo mivantana avy amin'ny masoandro (toy ny angovo taratra mafana amin'ny masoandro) sy ny angovo ankolaka avy amin'ny masoandro (toy ny arina, solika, entona voajanahary, shale solitany ary mineraly mora mirehitra sy angovo biomass hazo solika, angovo rano sy angovon'ny rivotra, sns.) .
(2) Angovo avy amin'ny tany mihitsy. Ny iray dia ny angovo geotherma ao anatin'ny Tany, toy ny rano mafana ambanin'ny tany, etona ambanin'ny tany, vato maina mafana; Ny iray hafa dia angovo nokleary atomika voarakitra ao amin'ny solika nokleary toy ny uranium sy thorium ao amin'ny hoditry ny tany.
(3) Ny angovo azo avy amin'ny sinton'ny zavatra eny amin'ny lanitra toy ny volana sy ny masoandro eto an-tany, toy ny angovon'ny rano.
Ny loharanom-angovo voalohany dia voasokajy bebe kokoa. Ny angovo azo havaozina hatrany na azo averina ao anatin'ny fotoana fohy kokoa dia antsoina hoe angovo azo havaozina, fa ny angovo tsy azo havaozina kosa dia antsoina hoe angovo azo havaozina. Ny angovo azo havaozina dia ny rivotra, ny rano, ny ranomasina, ny tondra-drano, ny masoandro ary ny biomass. Loharano angovo tsy azo havaozina ny arina, solika ary entona voajanahary.
Ny angovo geothermal amin'ny ankapobeny dia loharanom-angovo tsy azo havaozina, saingy raha jerena ny tahirin-tsarimihetsika goavana ao anatin'ny tany, dia manana ny toetran'ny fahaterahana indray. Ny fivoarana vaovao momba ny angovo nokleary dia hahatonga ny tsingerin'ny solika nokleary ary hanana ny fananan'ny firoboroboana. Dimy ka hatramin’ny folo heny noho ny herin’ny fusion nokleary ny angovo azo avy amin’ny fusion nokleary, ary ny deuterium, izay solika mety indrindra amin’ny fusion nokleary, dia be ao anaty ranomasina, izay “tsy mety ritra”. Ny angovo nokleary dia iray amin'ireo andrin'ny rafitra angovo ho avy.